pCloud Drive: serivisy fitehirizana rahona amin'ny sehatra cross-platform | Avy amin'ny Linux
pCloud Drive: serivisy fitehirizana rahona eo amin'ny sehatra hafa
Darkcrizt | 25/11/2021 06:15 | Nohavaozina amin'ny 25/11/2021 15:36 | fampiharana
Niovaova ny fitahirizana rahona ny fomba fitehirizana ireo angon-drakitra sarobidy ananantsika y misy orinasa maro manolotra an'ity haitao ity.
Noho ny fitahirizana rahona, antontan-taratasy marobe no azo tehirizina, sary, horonan-tsary na hira, tsy mila mampiasa ny habaka rehetra amin'ny solosainao na telefaona findainao.
Azonao atao ny miditra ary mizara ny rakitrao aza, tsy mila miankina amin'ny CD, kapila mafy ivelany, na safidy fitehirizana ara-batana hafa.
Izany no antony hiresahantsika amin'ity serivisy fitahirizana rahona ity.
1 Momba ny pCloud Drive
2 Ahoana no ahazoana kaonty maimaim-poana ao amin'ny pCloud Drive?
3 Ahoana ny fametrahana pCloud Drive amin'ny Linux?
Momba ny pCloud Drive
PCloud Drive dia serivisy fitehirizana rahona mpiasa an-tserasera izay azo idirana amin'ny alàlan'ny tranonkala rehetra. Mampiasa ny fenitry ny indostria RSA 4096 ho an'ny fanalahidy tsy miankina an'ny mpampiasa sy 256-bit AES ho an'ny lakilen'ny rakitra tsirairay sy ny fampirimana tsirairay.
Toy ny serivisy fitehirizana rahona malaza hafa, p Drive Drive izy ireo mamela anao handefa rakitra be dia be amin'ny alàlan'ny rohy fampidinana, ary koa ny fahazoana rakitra ao amin'ny habaka fitahirizan-drakitrao amin'ny alàlan'ny rohy mampakatra.
ihany koa afaka mizara ny lahatahiry amin'ny hafa izy ireo raha ilaina izany ary manome karazana fahazoan-dàlana hiditra isan-karazany.
Na oviana na oviana ianao dia afaka mahita hoe iza no izaranao azy sy hoe iza no zarainy aminao amin'ny alàlan'ny tabilao "Actions" ao amin'ny client desktop na amin'ny alàlan'ny "folder shared" amin'ny rindranasa finday.
PCloud dia mampiasa encryption TLS / SSL hiarovana ny fisieo rehefa nafindra manomboka amin'ny solosainao ka hatrany amin'ny mpizara anao.
Ny rakitra dia voatazona amin'ny toerana samihafa amin'ny mpizara ao amin'ny faritra fitehirizana angona azo antoka.
Ny iray amin'ireo antony mety ho safidy tsara kokoa ny pCloud noho ny Dropbox dia ny fiarovana lehibe atolotra azy.
Mifantoka amin'ny encryption sy fiarovana, pCloud dia manolotra tahiry maimaimpoana 10 GB isaky ny firaketana. Azonao atao ny mampitombo mihoatra ny 20 GB, manasa namana, mizara rohy amin'ny tambajotra sosialy, sns.
Manana ny endri-javatra mahazatra rehetra amin'ny serivisy rahonatoy ny fizarana rakitra sy fampifanarahana, fampifanarahana mifantina sns. pCloud koa manana mpanjifa teratany manerana ny sehatra izy, anisan'izany ny Linux, mazava ho azy.
Ahoana no ahazoana kaonty maimaim-poana ao amin'ny pCloud Drive?
Alohan'ny hifindrana amin'ny fomba fametrahana mpikirakira fampiharana dia ilaina ny fananana kaonty serivisy hahafahantsika mampiasa azy, afaka ataontsika izany amin'ny ity rohy manaraka ity.
Amin'ny famoronana ny kaontintsika fotsiny dia hahazo tahiry 10 GB maimaimpoana avy hatrany izahay. Afaka mahazo GB fanampiny isika avy amin'ny tranonkala, izay ahazoantsika 4 fanampiny amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza.
Izay hanamafisana ny adiresy mailaka anay, ampidiro ao anaty rahona ny rakitra iray ary apetraho amin'ny PC ny solosaina ary amin'ny findainao.
Ahoana ny fametrahana pCloud Drive amin'ny Linux?
Raha te-hametraka an'ity serivisy fitahirizana rahona ity ianao dia azontsika atao amin'ny fanarahana ny torolalana zarainay etsy ambany.
populaire tsy maintsy mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny pCloud Drive isika ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azontsika atao ny mahazo ny mpandrindra ny fangatahana ho an'ny Linux. Ity no rohy.
antsika manolora fisie amin'ny endrika AppImage izay tsy maintsy omentsika alalana famonoana izay azontsika atao amin'ireto baiko manaraka ireto:
Vita ity afaka mihazakazaka ny manager pCloud Drive amin'ny rafitra izahay amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny rakitra alaina na amin'ny fomba mitovy amin'izany azontsika atao amin'ny terminal amin'ny fanatanterahana ity baiko manaraka ity:
Vantany vao vita io dia hisokatra amin'ny rafitra ilay mpandrindra.
Sokafy ity mpitantana fampiharana ity dia hangataka antsika hiditra amin'ny serivisy miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hidirantsika.
Ary vonona Amin'ity no hampiasana ny kapila virtoaly izay manolotra anay ny serivisy hahafahana mitantana ny fisie ataonay eo amin'ny rahona ary mahazo miditra amin'izy ireo avy amin'ny fitaovana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » pCloud Drive: serivisy fitehirizana rahona eo amin'ny sehatra hafa
Daniel L dia hoy izy:
Efa an-taonako no nampiasaiko. Izy io dia iray amin'ireo serivisy rahona tsara indrindra misy ankehitriny; syncing manerana ny fitaovana dia tsara. 100% azo atoro.
Valiny tamin'i Daniel L
Bon dia, ny olana goavana amin'ny pCloud dia ny tsy "loharano misokatra"….
dami dia hoy izy:
hace Herinandro 2
Hatrany amin'ny 10Gb ihany no azoko ary vitako daholo izay lazainy, mametraka ny app, ny programa desktop, mampakatra rakitra, mampifanaraka, sns.
Sao dia mba misy mahay mahazo hatramin'ny 20Gb?
Mamaly amin'ny dami
Llonson dia hoy izy:
Kaonty maimaim-poana amin'izao fotoana izao dia miakatra hatramin'ny 10GB IHANY. Raha mila toerana bebe kokoa ianao dia tsy maintsy manakarama drafitra fandoavam-bola. Tsy misy intsony.
Valio an'i Llonson
Ny OS 4 tsy misy farany dia tonga amin'ny dikan-teny LTS miorina amin'ny Debian 11, Kernel 5.11 ary maro hafa
Ny kapila optika 5D dia afaka mitahiry 500 TB tapitrisa taona